Mpamatsy famokarana Hammer Mills - Mpanamboatra China Hammer Mills
Antsipirian'ny vokatra Ny motera lafarinina dia azo entina amin'ny motera elektrika na maotera diesel. Izy io dia afaka manoto anana, vary, katsaka ary voamaina isan-karazany. Vady, anana, hodi-kazo, ravina, volom-bary, sakam-bary, kankana katsaka, mololo, voamaina, makamba maina, sakafon-trondro, ahidrano, legioma tsy ampy rano, hawthorn, zava-manitra, daty, vinasse, mofomamy, reside ovy, dite, soja, Cotton , fakany zavamaniry, taho, ravina, voninkazo, voankazo, karazana holatra fihinana aman-jatony sy fitaovana hafa sarotra zahana ...
Antsipiriany momba ny vokatra Ny milina fitotoam-boanjo dia mety amin'ny tahon-katsaka, tahom-bary, tsaramaso, vodihazo ary vatan-kazo isan-karazany. Izy io dia afaka mametaka ireo fitaovana ho farantsakely. Ny masinina fanaovana silage katsaka dia afaka manatsara ny taham-piompiana biby, ny tahan'ny fihinanana ary ny fandevonan-kanina. Mandritra izany fotoana izany dia afaka mitrandraka izay voly, katsaka, varimbazaha, soja koa izy, ary hikosoka azy ireo ho lafarinina, izay madio sy madio ary azo hanina. Ny masinina dia milina misy tanjona roa miaraka amin'ny p ...